iPhone 13 ကို Amazon တွင် 819 ယူရိုသာ ရရှိနိုင်သည်။ ငါ mac ကပါ။
Ignatius ခန်းမ | | iPhone ကို, NOTICIAS
ဇန်န၀ါရီလ ရောင်းအားသည် Amazon သို့ တဖြည်းဖြည်း ရောက်ရှိလာသည်။ လွန်ခဲ့သော မိနစ်အနည်းငယ်က Soy de Mac မှ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကို ပြသခဲ့သည်။ AirPods Max ကို Amazon တွင် ယူရို 415 ဖြင့်သာ ရနိုင်သည်။ရသောအခါ ၎င်း၏ပုံမှန်စျေးနှုန်းမှာ 629 ယူရိုဖြစ်သည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ ၎င်းသည် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော လျှော့စျေးများဖြင့် Amazon တွင် ရှာတွေ့နိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသော Apple ထုတ်ကုန်မဟုတ်ပါ။ AirPods Max သို့ကျွန်ုပ်တို့ထည့်ရပါမည်။ iPhone 13 ၏စျေးနှုန်းသည် ယူရို 90 ကျသွားသည်။ ငါတို့လုပ်နိုင်တယ် Amazon တွင် 819 ယူရိုသာရှာပါ။ ၎င်း၏ 128 GB ဗားရှင်းတွင်။
ဤစျေးနှုန်းသည် 128 GB ဗားရှင်းနှင့် တို့တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။ အပြာရောင်များ, သန်းခေါင်ယံအပြာ y (PRODUCT) ကွန်ရက်. အကယ်၍ သင်သည် ပုလဲဖြူရောင်ကို ဝယ်ယူရန် စီစဉ်နေပါက၊ ကံမကောင်းစွာဖြင့် ဤမော်ဒယ်သည် ဈေးနှုန်းကျဆင်းသွားခြင်းမရှိပေ။
iPhone 13 128 GB ကို 819 ယူရိုဖြင့် ဝယ်ယူပါ။
iPhone 13 က ကျွန်ုပ်တို့ကို ဘာပေးသလဲ။
iPhone 13 တွင် ယနေ့ခေတ်တွင် အစွမ်းထက်ဆုံး Apple ပရိုဆက်ဆာကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရှိသည်- A15 Bionic၊ ၎င်းတို့နှင့်အတူပါရှိသော အသစ်အဆန်းများထဲမှ တစ်ခုကို ခံစားနိုင်စေမည့် ပရိုဆက်ဆာတစ်ခု။ ငါပြောနေတာ ရုပ်ရှင်မုဒ်၊ နောက်ခံကို မှုန်ဝါးစေခြင်းဖြင့် ဗီဒီယိုတွင် ပြသထားသည့် လူများ၏ အာရုံကို အလိုအလျောက် ပြောင်းလဲပေးသည့် မုဒ်။
iPhone 13 ၏ ကင်မရာအစုံကို ဖန်တီးထားသည်။ 12 MP မှန်ဘီလူးနှစ်လုံး၊ ထောင့်ကျယ်တစ်ခုနှင့် အလွန်ကျယ်ပြန့်သောထောင့်တစ်ခုဒါမှလည်း အခြေအနေအမျိုးမျိုးမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတယ်။ 12 MP ရှေ့ကင်မရာသည် ကျွန်ုပ်တို့အား 4K resolution ဖြင့် ဗီဒီယိုများ ရိုက်ကူးနိုင်စေပါသည်။
iPhone 12 ကဲ့သို့ပင်၊ iPhone 13 သည် 5G ကွန်ယက်များနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည် တူညီသော IP68 ကိုခံနိုင်ရည်လည်းပါဝင်သည်။ ဤ terminal ၏မျက်နှာပြင်သည် 6,1 လက်မအထိရှိပြီး၎င်းသည်၎င်းတို့၏အိတ်ကပ်အတွင်းသက်တောင့်သက်သာရှိသော iPhone ကိုရှာဖွေနေသူများအားလုံးနှင့် iPhone mini သည်သူတို့အတွက်အလွန်သေးငယ်သည်။
ဤအမျိုးအစား၏ကမ်းလှမ်းချက်အားလုံးကဲ့သို့ပင်၊ ယူနစ်အရေအတွက်ကန့်သတ်ထားသည်။. iPhone အဟောင်းကို သက်တမ်းတိုးဖို့ စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင် အခုအချိန်ကောင်းပါပဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » NOTICIAS » iPhone 13 ကို Amazon တွင် 819 ယူရိုသာ ရရှိနိုင်သည်။